Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Niakatra an-tapitrisany ny indostrian'ny kitapo sakafo
Tamin'ny taona 2020, mpanjifa maro kokoa noho ny teo aloha no nanapa-kevitra ny hanafatra kitapo sakafo sy sakafo sy zava-pisotro hafa an-tserasera mba hialana amin'ny fivarotana enta-madinika any amin'ny fivarotana be olona, ​​izay mety hiharan'ny otrikaretina COVID-19.
Nitohy hatramin'ny taona 2021 ny fitomboana raha nijery ny kitapo sakafo sy ny fivarotana e-varotra ho toy ny safidy mety amin'ny fivarotana enta-madinika mahazatra sy ny fandrindrana sakafo ny mpanjifa. Tamin'ny alatsinainy dia nanambara i Kroger fa ny kitapom-pisakafoanana sy ny orinasam-pikarakarana sakafo Home Chef dia nihoatra ny $ 1 lavitrisa tamin'ny varotra isan-taona satria ny mpanjifa dia nitady vahaolana sakafo mety kokoa nandritra ny areti-mifindra.
Araka ny voalazan'i Cara Rasch, mpanadihady Packaged Facts, tsy mahagaga ity vaovao momba ny Home Chef ity. “Sahala amin'ireo orinasam-pamokarana sakafo hafa, ny Home Chef dia nahazo tombony tamin'ny varotra nandritra ny areti-mifindra satria nandany fotoana bebe kokoa tao an-trano ny olona ary nitady karazany tamin'ny fotoam-pisakafoanana. Amin'ny maha-iray amin'ireo mpitarika ny tsenan'ny kitapo sakafo, ny Home Chef dia nanararaotra ny fironan'ny mpanjifa amin'ny mahandro sakafo sy mihinana bebe kokoa ao an-trano mba hahatratrarana ny tahan'ny fitomboana 118% ho an'ny taom-piasana 2020. ”
Packaged Facts' June 2021 National Consumer Consumer Survey dia nahita fa ho an'ireo izay mampiasa serivisy fanaterana kitapom-pisakafoanana, ny antony lehibe indrindra anaovana izany dia ny fanamorana, ny faniriana ny hanomana sakafo ho azy ireo, ary ny manandrana zava-baovao/miova sakafo. Maro amin'ireo mpampiasa kojakoja sakafo ihany koa no mitatitra fa mampiasa kitapo sakafo izy ireo satria ireo vokatra ireo dia mamonjy fotoana amin'ny fanomanana sakafo.
Nanamarika i Rasch, "Ny kitapom-pisakafoanana dia maneho soso-kevitra ho an'ny mpanjifa marary amin'ny fandrafetana sakafo na fivarotana entam-barotra izay mbola maniry sakafo masaka ao an-trano, satria mampihena ny fotoana lany amin'ny fitadiavana fomba fanamboarana sy fividianana akora izy ireo."
Nanohy i Rasch, "Ny harerahana amin'ny areti-mifindra tamin'ny taona 2020 sy 2021 dia nitarika olona maro hitady safidy vaovao hahazoana sakafo eo ambony latabatra. Mahasarika ireo mpanjifa ireo ny kojakoja sakafo satria mampihena ny fotoana lany amin’ny fikarakarana sakafo sy fiantsenana. Manafoana ny fako sakafo ihany koa izy ireo, satria ny sakafo rehetra dia misy akora misy ampahany tsara natao ho an'ny recipe iray manokana. "
Fanampin'izay, nanamarika i Rasch fa nanampy ny mpanjifa sasany hanatsara ny fahaizany mahandro sakafo ny kitapom-pisakafoanana mandritra ny areti-mifindra rehefa niova ny fahazarana misakafo. "Ho an'ireo izay tsy manana fahaiza-manao mahandro sakafo, ny kitapo sakafo dia mpamonjy aina amin'ny fampianarana azy ireo mahandro amin'ny fomba tsotra sy tsikelikely satria nahita filàna bebe kokoa na faniriana hahandro ao an-trano izy ireo."
Na izany aza, ny serivisy fanaterana kitapo sakafo dia somary niche. Packaged Facts 'Jona 2021 National Consumer Consumer Survey dia nahita fa 11% monja amin'ny mpanjifa no mitatitra fa mampiasa serivisy fanaterana kitapo sakafo tao anatin'ny 12 volana farany.